Shona | Nhetembo - Detembai Titandare - Part 2
Ho-o imi woye woye woye Shandai nesimba zvichanaka chete (Zvichanaka) Usimbe haushande (Usimbe ndimarimanzara) …
Posted On 12 Jul 11 Jul
Waita mahwekwe navakuru? Kutochecheredza nzira nokokoko, Haungazivi chawakatadza gorero, Pamwe wakadyisa munda nembudzi, Ukati pada zvavharana nenguva, Nyamba mhosva yagara hairovi! Chaunotanga chete…
Foromani ngaasadaroba, hazviitwi, Kutsvake zviro zvekude kureketa, Ngaatsvete kuita zvaanoita izvozvo, Kunditukira mushando zienza rino! Zvino kukaba jendye kuriyambutsa! Handichadiba hangu, ndaremba kushupwa,…
Posted On 12 Jun 3 Oct
Mukore uno mupwere angoda kufunda, Zvamunoziva tsaManyika udooma zvake, Usina kuenda kwaTsambe hauzi kufundaba, Bambo ndakarima maribowa, mupwere otadza ngei kufunda? Tsambe kumbatoenda,…
Posted On 7 Apr 12 Apr
Taireva (Takamboreva mukoma) Gore mwana gore mwana munovapeyi (Takamboreva mukoma) …
Kugara harahwa dzakamira? Zvino wamira vakuru vagara! Wongoti tuzu pamberi pedare, Kwaunobva hakuna vapangi? Mutambo woda kutsvuka ropa, Zvinorovesa! Kwave kubongomora usina kurohwa,…
Posted On 28 Feb 4 Mar
Pakukutu, diko ndivo makata! Kuranga waunoda zvinonetsa, Gona rikawe ranyakutumbura, Godo rikabva kune weropa, Chiunu chiri chababa vevana, Gororo rikawe chido chemwoyo, Kuputa…
Posted On 29 Jan 2 Feb
Zvavo vakakomborerwa, Newe angori makwikwi, Kutadza kana kundisiira zamu? Iwe kurudyi ini kuruboshwe, Kuzotoyamurwa negavakava, Potse ndaichatokusiira ndirini! Panyimo ngoma ndiyo-ndiyo, Unosiya chaenga…
Vamwene vangu godo vanaro Ndiende kuhuni zvonzi tutsotso Ndiende kumvura zvozvi mabvongwe Ndigeze zvangu zvonzi ipfambi Ndirege kugeza zvonzi ipfende
Posted On 30 Dec 29 Dec
Yekuda kuroorwa iyi
Ndakariona zvangu ndichasvika, Richindiongorora neziso raitaura, Zitete risina kubvira rambovanikwa, Ndichingofuratira, gotsi zvariri retsito, Rondinokora yekutanga tsoka muruwanze, Bva zino irema, nyangwe neasina…